BPS/Degmada (Jaatarka Horace Mann)K1 - 5aad
Heer Gobal: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-4:30pm
Dugsiga Kahor 8:15am-8:45am
Lambarka Taleefanka 617-635-8507
Diiwaangalinta dhamaan dugsiyada chartet ka ah waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah. Qoysaska ayaa ardaydooda kadiiwaangalin kara nidaamka bakhtiyaa nasiib yada ah haddii ay danaynayaan.
Waqtiga Kama danbaysta ee diiwaangalinta Bakhtiyaa Nasiibka ah
FEEBARAAYO 28, 2019
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka
Yoolkayaga: (1) inaan siino waxbarasho heer caalami ah arday kasta; (2) in la diyaariyo macalimiin leh tayada ugu saraysa; iyo (3) in aan ushaqayno ka iskaashato ahaan sidaan u hormarin lahayn dhamaan dugsiyada aaga Dudley.
Quraac bilaash ah ayaa labaxshaa laga bilaabo 8:15 ilaa 8:45.
Arbacooyinka: laga bilaabo 3:15 ilaa 4:30: farshaxanka, fayadhawrka, barnaamijyo tusmayn iyo casharo gaar ah xambaarsan kuwaasoo qayb ka ah casharada maalintii oo dhan ee dugsigeena oo la baro ardayda oo dhan ayadoon wax kharash dheeri ah laga qaadayn.
Damaanada 6 diiwaangalinta fasalka 6-12 ee machadka Dearborn STEM Academy.
Ardayda Luqadda Ingiriisiga
Dugsigu waxa uu u Adeegaa Dhammaan Ardayda lagu qoray nidaamka Codsiga Bakhtiyaa Nasiibka ah.